Webtalk မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - 💌 WebTK - သင်၏လက်မှတ်မှ WebTalK 🚀, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သတင်း & ပိုပြီး Invite 🔥
လိမ့်မည် Webtalk ကိုယ်ပိုင် cryptocurrency ရှိပါသလား
Webtalk ယင်းကိုခေါ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် cryptocurrency ရပါလိမ့်မယ် Webtalk ဒင်ျငါးငှေ။ 2018 ခုနှစ်, Webtalk'' s ကိုတည်ထောင်သူ RJ Garbowicz ဖော်ပြထား သူတို့ကအခြားစာချုပ်များကိုရောင်းချပြီးပြောင်းရွှေ့နိုင်ရန်အတွက် Smartch ကန်ထရိုက်များနှင့်အတူတွဲဖက်အကောင့်များအား Blockchain Technology တွင်ထည့်သွင်းရန်စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။ ဖတ်ပါ ဒီ post အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက Webtalk အကြွေစေ့။
လိမ့်မည် Webtalk Virtual / Augmented Reality (VR / AR) ကိုလက်ခံပါသလား။
အဆိုအရ ဤအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်, Webtalk အတူနီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့အစီအစဉ်ကို မှော် Leapတစ် startup ကုမ္ပဏီတိုးပွား Reality အတွက်အထူးပြု။
ဘယ်အချိန်မှာပါလိမ့်မယ် Webtalk ကြှနျတေျာ့ဘာသာစကားမှာဘာသာပြန်ထားသောရမည်လော
ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားကဘာလဲ Webtalk ပြည်တွင်းမှာသုံးပါသလား
Webtalk ရှေ့ဆုံး angular နှင့် Nativescript အသုံးပြုသည်။ နောက်ကျောအဆုံးအဘို့, Webtalk Clojure, Node, OrientDB, NginX, Docker, AWS, Beanstalk, S3, ဆား, ElasticSearch နှင့် Jenkins ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Webtalk - မျိုးဆက်သစ်လူမှုဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကသင့်ကိုသင့်အားပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်
၎င်းသည်အဆင့်မြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပါ ၀ င်ပြီး SocialCPX ဟုခေါ်သောထူးခြားသည့်အလွန်အကျိုးအမြတ်ကောင်းသောတွဲဖက်မှုအစီအစဉ်ကိုပေးသည်။
Webtalk, Inc သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ Tampa တွင်အခြေစိုက်သည့်လူမှုကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်လက်ရှိစီအီးအို RJ Garbowicz၊ Jeff Catherell, Andrew Peret, Basit Hussain နှင့် Jamie Pews တို့ကတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထင်ထင်ရှားရှားပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအင်္ဂါရပ်များ, Webtalk Facebook နှင့် LinkedIn တို့နေရာတွင်အစားထိုးရန်ရည်ရွယ်သည်။
Webtalk ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်အားထောက်ပံ့ရန်အတွက်ဆက်သွယ်မှုအခြေခံအချက်အလက်များရှာဖွေခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းနည်းပညာများကိုအာရုံစိုက်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြီးမားသောအချက်အလက်ဆော့ဖ်ဝဲနည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
မူပိုင်ခွင့် - ဆိုင်းငံ့ထားသည့်ဒေတာတံဆိပ်ကပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (AKA SocialCRM) ကိုသုံးခြင်း၊ Webtalk စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မတူနိုင်တဲ့အသုံးပြုသူတစ် ဦး အတွေ့အကြုံမှတဆင့်အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသစ်တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆက်အသွယ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အကြောင်းအရာများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊
Webtalk e-commerce လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်အသုံးပြုသူများကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်၊ ပူးပေါင်းရန်နှင့်ပါ ၀ င်ရန်ရှာဖွေနိုင်သော search engine တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုအရ သို့ Webtalk'' s ကိုတည်ထောင်သူ Webtalk RJ Garbowicz:Webtalk အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားများကထိန်းချုပ်ထားသော virtual ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆက်သွယ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဆက်သွယ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဆက်သွယ်ရန်စီမံခန့်ခွဲမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ …မကြာမီ၎င်းသည်ပူးပေါင်းမှု၊ စီးပွားရေး၊
Webtalk သည် 21st Century ၏အနှောင့်အယှက်အပေးဆုံးနည်းပညာဖြစ်သည်။ RJ Garbowicz, 2019 / 10 / 03
Webtalk အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာသည့်စပ်သောစားသုံးသူ / စီးပွားရေးကွန်ယက်နှင့်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆက်အသွယ်များ၏အပိုင်းအစများ, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အကြောင်းအရာ AND ...
သင်၏ဆက်ဆံရေး၊ သတင်း၊ အကြောင်းအရာ၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်း…
စာပို့ခြင်း / စာပို့ခြင်း / သတင်းလွှာ /
CRM / ဆက်သွယ်ရန်စီမံခန့်ခွဲမှု
အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး / Cloud သိုလှောင်မှု
ratings / ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ / အကြံပြုချက်များ
Marketplace (မကြာမီလာမည်) (ထုတ်ကုန် / န်ဆောင်မှု / အကြောင်းအရာ / apps များ)
(မကြာမီလာတော့မည်) အီးကောမတ်စ / DIY Website များ
ဖြစ်ရပ်များ / Meetups / မိတ်ဆွေ Finder ကို (မကြာမီလာတော့မည်)
ကြော်ငြာခြင်း (CPM, CPC, CPA / CPX, CPD, CPV) + Analytics + KPIs (မကြာမီလာမည်)
Webtalk Facebook, LinkedIn နှင့် Amazon တို့နှင့်တူညီသောလူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် SocialCPX ဟုခေါ်သောဆွဲဆောင်မှုရှိသောတွဲဖက်မှုအစီအစဉ်ရှိသည်။
Is Webtalk တစ်ဦးလိမ်လည်မှု?
ကျနော်တို့မယုံကြည်ကြဘူး Webtalk ကုမ္ပဏီသည်နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည် Webtalk Delaware တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ဖလော်ရီဒါတွင်အခြေစိုက်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၈ မီလီယံကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ၈ နှစ်ကြာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
Webtalk သြဂုတ်လတွင်ပထမဆုံးကော်မရှင်ငွေပေးချေမှုကိုထုတ်ပေး ဒီမှာ အချို့သောအစောပိုင်းငွေပေးချေမှုအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိမပေးရသေးသောကော်မရှင်များ၏အစီရင်ခံစာမရှိပါ။
Plus အား, Webtalk ရှိပါတယ် ကျင့်ဝတ်ခိုင်မာတယ် နှင့်အစိုင်အခဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ် အရာတစ်ဖန်လိမ်လည်မှုဆန့်ကျင်ထောက်ခံသူများဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ် Webtalk။ သင်လိုအပ်သမျှကိုသွားပါ စာမျက်နှာ sign up ကိုသင်၏အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ မိုဘိုင်းနံပါတ်၊ စကားဝှက်နှင့်မွေးသက္ကရာဇ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ စာရင်းသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုအပြီးသတ်ရန်၊ သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ အလို့ငှာ အကောင်းဆုံးအသင်းအတွက် join Webtalkသင့်အားမည်သူဖိတ်သည်ကိုမေးမြန်းသောအခါ“ STAR” ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ၄ င်းသည်သင့်အားအားသာချက်များစွာကို ၅၀% အဖွဲ့ ၀ င်ငွေဝေစုအဖြစ်ပေးလိမ့်မည်။
ဘယ်လိုပူးပေါင်းရမည်နည်း Webtalk Stars Team?
ပူးပေါင်းရန်နည်းလမ်း ၃ ခုရှိသည် Webtalk Stars Team:
စာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ Webtalk ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက် link တစ်ခုသို့မဟုတ်အသုံးပြု။ သင့်အားမည်သူဖိတ်ကြားသည်ကိုမေးမြန်းသောအခါ“ STAR” ကိုဝင်ရောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဖိတ်ကြားချက် link ကိုဖြစ်ပါတယ် webtalk.love သင်တိုက်ရိုက်ထံမှ sign up လုပ်နိုင်ပါတယ် JLK ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်း။ သင့်တော်သောအသင်းတွင်သင်စာရင်းသွင်းနေကြောင်းသေချာစေရန်၊ စာရင်းဖွင့်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်စစ်ဆေးပါ -“ Affiliate ID: star (6629702)” ဟူသောဖော်ပြချက်အသေးလေးတစ်ခုကိုသင်တွေ့သင့်သည်။
သငျသညျပြီးသားပါလျှင် Webtalk အခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင်၊ သင်သည်“ ၏မွေးစားအဖွဲ့ဝင်” ဖြစ်လာနိုင်သည် Webtalk Stars Team by တစ်ကြိမ်အခကြေးငွေပေးဆောင် ယနေ့အထိ၏ $ 20 (အခကြေးငွေအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးမြှင့်လိမ့်မည်) ၏။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား“ ဇာတိ” အဖွဲ့ဝင်များ၏တူညီသောအားသာချက်များနှင့်ကြယ်နှစ်လုံးပါ ၀ င်မှုအခြေအနေကိုပေးလိမ့်မည်။ ဆက်သွယ်ပါ
သငျသညျ၌ရှိကြ၏လျှင်ငါတို့အသင်း join ဖို့တတိယနည်းလမ်း Webtalkသည် ငါတို့အဘို့ကြီးသောအမှုကိုပြုလော့ကြော်ငြာလိုwebtalk.love"ဖန်တီးမှုနှင့်အကျိုးရှိစွာလမ်းအတွက်, ငါတို့အဘို့အနည်းဆုံးရည်ညွှန်း 10 (သက်သေပြလိုအပ်) ။ ၎င်းသည်သင့်အားသက်ဆိုင်ရာအားသာချက်များအားလုံးဖြင့်ကြယ်ပွင့်နှစ်ပွင့်အဆင့်ကိုပေးလိမ့်မည်။ ဆက်သွယ်ပါ
အမျိုးအစား: Team Webtalk Stars
ဒါဟာဝင်ငွေလွယ်ကူသည် Webtalkအသုံးပြုရန်အသစ်များကိုဖိတ်ရန်ဖြစ်သည် သင်၏ရည်ညွှန်းချက်လင့်ခ်များ။ သင်၏ဘဝအတွက်သင်၏ရည်ညွှန်းမှုများမှရရှိသော ၀ င်ငွေအားလုံးအပေါ် ၁၀% ကော်မရှင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်
ထပ်မံ၍ သင်သည်အဆင့် ၅ ဆင့်ကိုရရှိပါကသင်၏ရည်ညွှန်းမှုများမှရရှိသော ၀ င်ငွေအားလုံးအပေါ် ၁၀% ကော်မရှင်ရရှိလိမ့်မည် နက်ရှိုင်းသော5အဆင့်ဆင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်စစ်ဆေး အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက် သင့်ရဲ့ဝင်ငွေအလားအလာခန့်မှန်းရန်။
နောက်ဆုံး၌မဟုတ်ပါ၊ သင်၌ပါလျှင် Webtalk Stars Team၁၀ ယောက်ကိုဖိတ်ကြားလျှင်၊ တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ထပ်တိုးနိုင်သည် Webtalk.
ကနေဝင်ငွေကိုဘယ်လို Webtalk Stars Team?
အဆိုပါ Webtalk Stars Team is ထူးခြားသော အကြောင်းမှာ၎င်းသည်၎င်း၏ ၀ င်ငွေ၏ ၅၀% ကိုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပရဟိတလုပ်ငန်းများနှင့်မျှဝေသည်။
ကနေဝင်ငွေနိုင်ရန်အတွက် Webtalk Stars Team အနည်းဆုံးကြယ်တစ်ပွင့် status ရဖို့လိုတယ် -
အဆိုပါ get 1-ကြယ်ပွင့် အနည်းဆုံးဖိတ်ကြားဖြင့် status ကို2တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများ* ရန် Webtalk (အထောက်အထားလိုအပ်); ကြယ်ငါးပွင့်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်တစ်လလျှင် ၁၀ ဒေါ်လာမှဒေါ်လာ ၁၀၀ ကြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဝင်ငွေရရှိရန်မျှော်လင့်နိုင်သည် (အာမခံချက်မရှိပါ) ။ * (၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောအခြေအနေ)
အဆိုပါ get 2-ကြယ်ပွင့် အနည်းဆုံးဖိတ်ကြားဖြင့် status ကို 10 တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများ* ရန် Webtalk (အထောက်အထားလိုအပ်); ကြယ်ငါးပွင့်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်တစ်လလျှင် ၁၀ ဒေါ်လာမှဒေါ်လာ ၁၀၀ ကြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဝင်ငွေရရှိရန်မျှော်လင့်နိုင်သည် (အာမခံချက်မရှိပါ) ။ * (၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောအခြေအနေ)
အဆိုပါ get 3-ကြယ်ပွင့် အနည်းဆုံးဖိတ်ကြားဖြင့် status ကို 50 တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများ* ရန် Webtalk (အထောက်အထားလိုအပ်); ကြယ်ငါးပွင့်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်တစ်လလျှင် ၁၀ ဒေါ်လာမှဒေါ်လာ ၁၀၀ ကြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဝင်ငွေရရှိရန်မျှော်လင့်နိုင်သည် (အာမခံချက်မရှိပါ) ။ * (၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောအခြေအနေ)
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရမည်မှာဤအဆင့်များထဲမှမည်သည့်အရာကိုမဆိုရယူရန်အခြေအနေသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အဆင့်အတန်းရရှိရန်ရည်ညွှန်းသူအရေအတွက်သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးလာလိမ့်မည်။ သို့သော်အဆင့်အတန်းကိုရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် (ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်မှု မှလွဲ၍) ကတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားသည်။
သင်၌မသေးလျှင် Webtalk Stars Teamကျေးဇူးပြုပြီးကြည့်ပါ ဘယ်လိုပူးပေါင်းရမည်နည်း Webtalk Stars Team.
မ Webtalk ကမ္ဘာကြီးကိုအောငျနိုငျဖို့စီစဉ်?
Webtalk၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာစီးပွားရေးကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တည်ထောင်သူ RJ Garbowicz သည်နှင့်အညီ။ မင်းအကြောင်းအများကြီးသင်ယူနိုင်ပါတယ် Webtalk's ရည်မှန်းချက် ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ.
ပင်မစာမျက်နှာ - Webtalk အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ